काठमाडौं । चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले पुनः एकीकरण भन्दै आक्रमण गर्ने संकेत गरेपछि ताइवानका राष्ट्रपति साइ इङ वेनले कुनै हालतमा नझुक्ने बताएकी छिन् । ताइवानको राष्ट्रिय दिवसमा वेनले चीनको दबाबसामु नझुक्ने बताएकी हुन् । हामी जति बढी उपलब्धि हासिल गर्छौं उति बढी चीनको दबाबको सामना गर्छौं, ताइवानकी राष्ट्रपति वेनले भनिन् । उनले ताइवान चीनको पथमा नहिंड्ने स्पष्ट पार्दै लोकतन्त्र...
दलभन्दा माथि उठेर युवाको काम गर्छौँः शिवहरि दाहाल
मलाई गरिएको निषेधको राजनीतिको विरुद्धमा मेरो उम्मेदवारीः न्यौपाने
मकवानपुर । मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघका निवर्तमान अध्यक्ष राजकुमार न्यौपानेले संघको हुन गइरहेको निर्वाचन सभामा आफुले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने बताएका छन् । नवयुग अनलाइन टेलिभिजनको कार्यक्रम ‘नवयुग बहस’ मा बोल्दै न्यौपानले संघबाट आफुप्रति गरिएको निषेधको राजनीतिको विरुद्धमा उम्मेदवारी दिन लागेको बताएका हुन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व कार्यकारिणी सदस्य समेत भइसकेका न्यौपानेले आफुलाई मकवानपुरे उद्योगी व्यवसायीले निर्वाचित...
मकवानपुर । मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघका निवर्तमान महासचिव महेन्द्र राउतले संघको अध्यक्ष पदमा आफ्नो उम्मेदवारी रहने दाबी गरेका छन् । नवयुग अनलाइन टेलिभिजनको कार्यक्रम ‘ नवयुग बहस’मा बोल्दै राउतले चुनावमा अध्यक्ष पदमा आफ्नो उम्मेदवारी रहने जानकारी दिँदै व्यवसायीको साथ मिल्नेमा आफु विश्वस्त रहेको बताए । यसअघिको निर्वाचनमा पराजित हुनुपरेको अवस्थालाई स्मरण गर्दै उनले अबको चुनावमा जितको लागि आफ्नो उम्मेदवारी...
परिणाममुखि ढंगले अघि बढ्छौँः अध्यक्ष राना (हेर्नुहोस् भिडियो)
मकवानपुर । भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति मकवानपुरका अध्यक्ष रामेश्वर रानाले आयोगले परिणाममुखि ढंगले काम गर्ने बताएका छन् । नवयुग अनलाइन टेलिभिजनको बहस कार्यक्रम ‘ नवयुग बहस’ मा बोल्दै अध्यक्ष रानाले यो आयोग नै भूमिबिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने अन्तिम आयोग बनाउन सबैको सहयोगको अपेक्षा गरे । मकवानपुरमा रहेका सबै दलित भूमिहीन र भूमिबिहीन...
मकवानपुरमा उद्योगी व्यवसायीहरुको ठूलो संस्था मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघको वर्तमान कार्यसमितिको कार्यकाल यसवर्ष सकिँदै छ । वि.स २०७४ सालमा निर्वाचित भएर आएपछि मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वले के–कस्तो काम गर्‍यो ? व्यवसायीको हितको निम्ति कस्तो कदम चाल्यो ? कोरोना महामारीबीच सरकारले जारी गरेको लकडाउन अवधिमा के कस्तो पहलकदमी भयो ? प्रस्तुत छ, यी विषयहरुमा मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष...
विश्वभर महामारीको रुप लिँदै फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को प्रभावबाट नेपालको शैक्षिक क्षेत्र समेत अछुतो रहन सकेन् । गतवर्षको चैत ११ गतेबाट सरकारले लकडाउन गरेसँग देशभरका विद्यालयहरु समेत बन्द भएका थिए । अहिले भने केही मापदण्ड, सुरक्षा उपाय अपनाएर विद्यालयहरु संचालन भैरहेको अवस्था छ । यसै सन्दर्भमा निजी तथा आवसीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) मकवानपुरका कार्यवाहक अध्यक्ष विनोद सुवेदीसँग...
लोकसेवा आयोगले पछिल्लो समय ठूलो संख्यामा कर्मचारी माग गर्न थालेसँगै लोकसेवा परीक्षाको तयारीमा धेरै युवाहरु जुटेको पाइन्छ । कतिले आफै घरमा पढेर तयारी गरिरहेका छन् त कतिले इन्स्टिच्युटमा गएर लोकसेवाको तयारी गरिरहेका छन् । लोकसेवाको तयारी गरेका सबैजना नाम निकाल्न सफल हुन्छन् भन्ने छैन्, तर पनि नाम निकाल्नको लागि विद्यार्थीहरु निरन्तर प्रयासरत छन् । यसैबीच विगत १० वर्षदेखि हेटौंडामा...
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको मुटुको रुपमा ४ नं वडालाई मानिन्छ । जनसंख्या, बजार, शैक्षिक केन्द्र लगायतका विविध कुराको आधारमा बृहत वडाको रुपमा ४ नं वडालाई चिनिन्छ । पुर्वाधारको हिसाबले अन्य वडाको तुलनामा अगाडि रहेको यस वडाको वर्तमान अवस्था, भैरहेका कामहरु, थप योजना लगायतका विषयहरुमा नवयुग डटकमका संवाददाता रुपेश थापासँग वडाध्यक्ष नवीन सिग्देलले गरेको कुराकानी । १. हेटौँडा उपमहानगरपालिका वडा नं ४...
काठमाडौँ । लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सफलतासँगै नयाँ संविधान जारी गरिएपछि मुलुकमा स्थिरता र समृद्धिका लागि जनादेशप्राप्त सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को नेतृत्व तहमा उत्पन्न पछिल्ला विवादले राजनीतिक क्षेत्र परिदृश्य तातिएको छ । कार्यकर्ता तहमा घर झगडाकै कारण पार्टी कतै विभाजनमा पुग्ने त होइन भन्ने संशय उत्पन्न भएको छ । गत निर्वाचनमा वाम गठबन्धनका माध्यमबाट करीब दुई तिहाइको जनादेशपछि जनभावनानुसार...
123 Newer >>